गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद समाधान संगै समृद्धिको खाका सहित आएको छुः प्रमुखका उम्मेदवार शाही - Myagdi Online
गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद समाधान संगै समृद्धिको खाका सहित आएको छुः प्रमुखका उम्मेदवार शाही
2338 पटक पढिएको
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिमा वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसंगको तालमेलबाट गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवारमा एमालेका नेता खिमबहादुर शाही चुनाबी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद समाधान र गाउँपालिकाको समृद्धिको बिषयमा हामीले उहाँसंग कुराकानी गरेका छौँ प्रस्तुत छ गाउँपालिका प्रमुख शाहीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश
१ ) रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यहाँलाई सर्वप्रथम बधाई तथा सफलताको शुभकामना । कस्तो लागिरहेको छ गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवार बन्दा ?
–सर्वप्रथम तपाईलाई धेरै धेरै धन्यबाद । मलाई एकदमै खुसी लागेको छ । म विगत २० बर्ष अघि तत्कालित पिप्ले गाविसको अध्यक्ष भएर पनि काम गरेको हुँु । २०५४ सालको निर्वाचनमा म तत्कालिन गाविस अध्यक्ष भएर काम गरेको थिए । राजनीतिमा लागेपछि मैले कहिल्यै पदको दुरुपयोग गरेको छैन् । मैले राजनीतीलाई समाजसेवाको रुपमा लिएकै कारण अहिले म गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा पार्टीबाट सर्वसम्मत रुपमा उम्मेदवार बनेको हुँु । स्थानीय तहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो अनुभव मसंग छ । र मेरो प्रतिद्धन्द्धी स्थानीय तहबारे अनुभवी नभएको कारण जनताले निर्वाचनमा मलाई मतदान गर्नेमा म विश्वस्त छु ।
२ ) उम्मेदवारी दर्ता संगै जनतको घरदैलोमा पुग्नुभएको छ । के भन्छन जनता ?
–वास्तबमा जनता उत्साहित छन् । बिगत लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा जनप्रतिनिधि विहिन अबस्थामा जनताले धेरै दुख र सास्ती खेपेको कारण पनि निर्वाचनप्रति जनताको चासो बढेको छ । विगत २० बर्षदेखि सामाजिक विकासमा खटिएको एउटा युवा गाउँपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार बनेकोमा जनता झनै खुसी छन् । आठ वटै वडाका जनता उत्साहित छन् । मेरो गठबन्धनबाट म एमालेबाट प्रमुख र माओवादी केन्द्रबाट हरि भण्डारी उपप्रमुखमा रहेर हामीले निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छौँ । यो गाउँपालिकाको समृद्धिको लागि हामीले राजनितीक दलहरुबिचमा चुनाबी तालमेल गरि संयुक्त उम्मेदवारी दिएका हौँ । हाम्रो गठबन्धनले गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा थप नयाँ आयाम थप्ने निश्चित छ ।
३) तपाई प्रमुखमा उम्मेदवार बन्नुभएको रघुगंगा गाउँपालिकामा केन्द्रको विवाद छ । कसरी मिलाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
– हो बास्तवमा हाम्रो रघुगंगा गाउँपालिकामा भौगोलिक विकटताको कारण गाउँपालिकाको सिमाना र आयोगले तोकेको अस्थायी केन्द्र अबैज्ञानिक छ । वैज्ञानिक रुपमा पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दग्नाम र चिमखोलाका नागरिकलाई मौवाफाँट र झिँ, पाखापानी र कुईनेमंगलेका जनतालाई पाखापानीमा अर्को केन्द्र दिइनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर आन्दोलन पनि ग¥र्यौ तर सरकारी तवरबाट त्यो समस्या हल हुन सकेन् । अब हामीले निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिले नै जनतालाई सुविधा पुग्ने गरि केन्द्र विवाद हल गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
४) के छ त्यस्तो योजना ? जस्ले रघुगंगाको केन्द्र विवाद सजिलै हल गर्न सम्भव छ ।
मेरो योजना के छ भनेपछि पाखापानी र मौवाफाँट दुबै तर्फ केन्द्र राखेर जनतालाई सुविधा दिन सकिन्छ । जनताले दुख पाउने होईन जनप्रतिनिधि नै दुबैतर्फ पुगेर जनतालाई सेवा दिने मेरो योजना हो । दुबै तर्फ केन्द्र राख्नुको उदेश्य भनेको रघुगंगा वारीका बहुसंख्यक नागकिरको लागि मौवाफाँटमा केन्द्र राख्ने र पारिका अल्पसंख्यक र जनजाती समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रका नागरिकलाई पनि पाखापानीमा केन्द्र राख्न निरन्तर सघर्ष गर्ने र त्यो सम्भव नभएसम्म दुबै तर्फ जनप्रतिनिधि नै पुगेर सेवा दिनुपर्छ भन्ने हो ।
५) रघुगंगा गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा विकट पनि छ । यो गाउँपालिकाको समृद्धिको लागि के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
–बास्तबमा अहिले नयाँ संरचनामा रहेका रघुगंगा गाउँपालिकामा सडक, सञ्चारको समस्या प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । मैले यो गाउँपालिकामा रिङरोडको अबधारण बनाएको छु । यदि निर्वाचनमा मलाई जनताले बिजयी गराएभने मैले दग्नामको बुक्लको फेदीबाट झिँको पुछारमा रहेको रघुगंगा नदीमा पक्कि मोटरेवल पुल निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट झिँ नयाँ ट्याक विस्तार गरि पारिका जनतालाई वारी आउन र वारीका जनतालाई पारी जान सहज बनाउँछु । त्यसपछि दग्नामको भिरमा पुगेको सडकलाई दग्नाम, दरमिजा हुँदै चिमखोला जोड्ने र पाखापानी देखि सडक विस्तार गरि कुइनेमंगले जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।
यति गर्न सकियो भने गाउँपालिका रिङरोडमा जोडिन्छ । जस्को कारण जनतालाई आवतजावतमा सहजता हुने मैले विश्वास लिएको छु । अर्को कुरा अहिले जसरी बेग र बाँदुक जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण हुँदै छ त्यस्तै प्रकृतिको पुल दरमिजा र पाखापानीमा पनि हाल्ने योजना छ । साथै गाउँपालिकामा हाल सवारी साधन सञ्चालन हुँदै आएका सडकहरुको स्तरोन्नती संगै खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका विकासका आयामहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा अगाडी बढाउने योजना बनाएको छु । त्यस्तै मैले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोक्नका लागि युवाबिशेष कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छु ।
६ ) बास्तवमा तत्कालै गाउँपालिकाको आम्दानीका स्रोतहरु केही पनि देखिँदैन् ? कसरी सम्भव छ रघुगंगा गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन ?
–अहिले झट्ट हेर्दा आम्दानीका स्रोत नदेखिएको होला । मैलेत यो रघुगंगा गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन प्रशस्त सम्भावना नै सम्भावना देखेको छु । हेर्नुहोस यो गाउँपालिकालाई पाँच बर्षभित्रमै केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र नमुना गाउँपालिकाको रुपमा अगाडी बढाउन सकिन्छ । किनकी हामीसंग जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी, खानी लगायतको क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना छ । यि क्षेत्रको उजागर गर्न निश्चित योजना सहित अगाडी बढ्न सकियो भने मात्रै हामी गाउँपालिकालाई समृद्धिको दिसातर्फ अगाडी डोहोर्‍याउन सक्छौँ ।
७) यहाँको महत्वपूर्ण समयको लागि धन्यबाद ।
–यहाँको लोकप्रिय म्याग्दीअनलाईन मार्फत मेरा धारणा राख्ने अबसर दिनुभएकोमा यहाँ र म्याग्दीअनलाईन परिवारलाई धेरैधेरै धन्यबाद ज्ञापन गर्दछु ।